“१५ दिनदेखि ,ह’राएकी विनाले, बनाएको टिकटक’ भिडियो बाहिरियो , किन तिमीले मेरो चित्त दु’खायौ ? भन्दै टिकटकमा पीडा पोखेको भिडियो’सामाजिक सञ्जालमा’ भा’इरल बन्यो” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“१५ दिनदेखि ,ह’राएकी विनाले, बनाएको टिकटक’ भिडियो बाहिरियो , किन तिमीले मेरो चित्त दु’खायौ ? भन्दै टिकटकमा पीडा पोखेको भिडियो’सामाजिक सञ्जालमा’ भा’इरल बन्यो”
“काठमाडौं । चितवनकी बिना सापकोटालाई प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । प्रेमीसंग मोटरसाइकलमा संगै निस्केकी विना त्यसपछि घर फर्केर आइनन् । उनका प्रेमीले पनि चौविसकोटीवाट विना कता गइन् आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।”
“उनका प्रेमी भनिएका युवक अहिले पक्राउ परेका छन् । बिनालाई आफ्ना प्रेमी अर्की युवतीसंग पनि नजिकिएका छन् भन्ने आ शंका थियो । यो कुरा अहिले उनका परिवारका सदस्यहरुले भिडियोमा दिएको अभिब्यक्तिवाट पुष्टि हुन्छ ।”
“अहिले बिनाको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । जसमा उनले दुखी हुँदै भिडियो बनाएकी छन् । प्रेममा विश्वास घा त भएको अभिप्रायका भिडियो उनले टिकटकमा बनाएको देखिन्छ । निकै भावुवक देखिएकी विनाले तिमीले मेरो मन निकै धेरै दुखाएका छौ भन्दै टिकटक बनाएकी छन् । यो टिकटक भिडियोवाट पनि उनी प्रेममा निकै दुखी थिइन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।”
“विनाका आमा लगायत उनका परिवारका सदस्य ति अर्की युवतीको घरमा पनि कुराकानी गर्न गएको अघिल्लो एक भिडियोमा बताएका छन् । उनीहरुले यो घटनामा आफुहरुलाई सामेल नगराउन भनेका छन् । आफ्नो घरमा प्रवेश समेत नदिएको भन्दै विनाको आमाले हामी कुराकानी गर्न आएका हौँ म विनाको आमा हो भनेपछि मात्र आफुहरुलाई घर भित्र प्रवेश गर्न दिएको बताएकी छन् ।
Previous “बलिउड अभिनेत्री, महिमा चौधरी: बोल्छिन् यती, राम्रो नेपाली, भन्छिन्- ‘गोर्खाली हुँ’ (भिडियोसहित)
Next “निशा घिमिरेलाई हस्पिटल,भित्रै आएर बि,ष खान दिनेको भयो खुलास, निशालाई ठीक हुन नदिने यस्तो चलखेल कसको- भिडियो सहित”
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र ले यस्तो भने पछी भयो हं,गामा,यसो भन्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? अब के होला ? (भिडियोसहित)